Dowlada oo loogu baaqay in ay soo saarto shuruuc ay maamulayaasha dugsiyada ardayda ku edbin karaan – The Voice of Northeastern Kenya
Dowlada oo loogu baaqay in ay soo saarto shuruuc ay maamulayaasha dugsiyada ardayda ku edbin karaan
Dowlada dalkan Kenya gaar ahaana xildhibaanada ayaa loo jeediyay baaq hor leh oo la xiriira sidii ardayda ay u noqon lahayeen kuwo nidaamka raaca.
Qaar ka mid ah maamulayaasha dugsiyada countiga Uasin Gishu ayaa walaac ka muujiyay geedi socodka dheer oo ay qaadaneyso in ardayda falal dambiyeedyada ay geeysanaayan lagula tacaalo.
Waxay barayaashan doonayaan in xildhibaanada ay kal fadiyaashooda qaar u adeegsadaan in ay soo saran shuruuc dugsiyada u gaar ah oo maamulayaasha ay ardayda nidaam daro la yimaado talaaba uga qaadi karaan.
Maamulaha dugsiga sare ee Regge oo ku yaala countiga Uasin Gishu ayaa sheegay in sharci laanta dugsiyada u gaarka ah ay keentay in arday badan ay ku lug lahadaan falalka ka soo horjeeda nidaamka wanaagsan ee ardayga looga baahanyahay.
Dhanka kale waxaa isa soo taraya kala qeybsanaanta la xiriirta in la soo celiyo garaaca geysto ardayda dambiyada kala duwan sameeya.
Afhayeenka aqalka senetka Ekwee Ethuro ayaa doonaya in nooc ka mid ah siyaabihii horay ardayda lagu edbin jiray gaar ahaana garaaca la soo celiyo.
Hadalkan ka soo yeeray qaar ka mid ah macalimiinta dalka ayaa ku soo begmaya iyadoo arday badan oo lala xiriirinayo in ay dugsiyadoodu gubeen ama qorsheynayeen in ay dab qabadsiyaan ay ku jiraan gacanta laamaha ammaanka .
← Adriano oo lagu wado in u isaga tago kooxda Barcelona isago ku wajahan Besiktas
Dowlada oo Qorsheyneeso in ay qorto Macalimiin Cusub →